विपद्, वर्क फ्रम होम र पूर्वाधार | परिसंवाद
विपद्, वर्क फ्रम होम र पूर्वाधार
कञ्चन मणि दीक्षित	 मङ्लबार, बैशाख ९, २०७७ मा प्रकाशित
आजबाट २८ दिन पुगेछ नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको । लकडाउन सुरु गरेको दिनको विहान बैङ्गलोरका एक साथीले वर्क फ्रम होमको पेजमा सहमति जनाउन भनेर अनुरोध गरेका थिए । कोभिड–१९ को समयमा सक्रमण हुनबाट जोगिने उपाय भनेर धेरै संस्थाले यसलाई उपनाउन थालेका थिए । यसो गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा एक अर्काको नजिक आएर काम गर्नु पर्दैन र रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीको स्वास्थलाई मध्यनजर गर्दै घरबाट काम गरौं भनेर निर्णय गरेर कार्यालयबाट आएका थियौं। त्यही दिनको बेलुका नै सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो । लकडाउनमा हामी वर्क फ्रम होम भनेर तर बस्यौं । तर हामीलाई घरबाट काम गर्न अहिलेका पूर्वाधारले सघाउँछ त भन्ने प्रश्नहरु प्रशस्त थिए हामीसँग ।
यी समस्या हेर्दा हामी विपदका लागि पक्का पनि तयार रहेन रहेछौं । विगतमा बाढी र पैह्रो आए, धेरै पाठ दिए तर केही सिकेनौं । ठूलो भुकम्प आएर सामाजमा हलचल ल्यायो । विपद व्यवस्थापनका केही नयाँ सोच र सिकाई आउँछ कि भन्ठानेको त त्यसलाई पनि हामीले केही महिनामा बिर्सिसक्यौं । अहिले कोभिड माहामारीको त्रास छ सबैमा र कतिपयले त यसलाई जितेर अगाडी पनि बढिसकेका छन् । विगतका विपदले झैं यसले पनि विपद ब्यवस्थापनका त्रुटिहरु सूश्म रुपमा औंल्याइदिएको छ । भोलिका दिनमा योभन्दा पनि डरलाग्दा विपदका घटनाहरु आउने निस्चितै छ भन्ने हेतुले सिकाइलाई आत्मसाथ गर्दै विपदका घटना न्यूनीकारण गर्न उचित पूर्वाधारको विकासमा जोड दिऊँ ।
भोलिपल्ट कसरी घरबाट काम गर्ने भनेर योजना तयार गर्दै थिएँ, कार्यालयको एक जना साथीले फोन गर्नुभयो र “सर ट्रयास्फमर पड्केर नेटमा समस्या छ जसले गर्दा नेटमिटिङमा समावेश हुन सक्दिन” भन्नुभयो । म पनि यस्तै चपेटामा थिए । लकडाउनको बेला सबैले आ–आफ्ना कार्यक्रम बनाँउन ब्यस्त हुनथाले, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि के कम, मानिस र गाडीको चाप घटेको बेला, यही मौका हो विजुलीको खम्बा सार्ने । बस के चाहिन्थ्यो बिजुली, केबल टिभी र नेट एकै छिनमा चैट । विजुलीको लाइन सहित सतीभए केबल, फोन र नेटका तारहरु । धन्न आजभोलि मोवाइलले गर्दा फोनको प्रयोग कम हुन्छ, नत्र त विपदको बेला फोन नहुँदा अर्को आपत पथ्र्यो । विजुली त्यही दिन बेलुका आए पनि, इन्टरनेट दुई दिनपछि मात्र जोडियो । सबैको समस्या उही त हो नि । कोभिडको कारणले जनशक्ति जुटाउन गा¥हो भएछ सेवा प्रदायकलाई ।
विपद जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो प्राथमिकता सञ्चार हो भनेर हामी सबैले बुझेकै थियौ नी । सञ्चारको माध्यम चुस्त रहेमा विपदसँग जुध्न र जलवायू परिवर्तनका कारणले हुने विपत्तीसँग अनुकुलित हुन भद्दत पु¥याउँछ भन्ने कुरा विपद जोखिम न्यूनीकरणको सेमीनार र भेलाहरुमा प्रसस्तै छलफल भएकै हो । फेरि कता चुक्यौं त हामी ? प्राधिकरणले केही दिन कुरेको भए पनि हुन्थ्यो होला । लकडाउनको समयमा समाचार र विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने जानकारी अति महत्वपूर्ण हुन्छ, यसलाई केही दिन नचलाउँ भन्ने बुद्धि किन पलाएन ? कमजोरी हामी सबैमा छ । यो समस्या भनेको विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई गम्भीर रुपमा नलिनु र यस्ता कार्यलाई परियोजनाको एउटा कार्यका रुपमा मात्र सीमित गर्नु नै हो । विपदको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपाए अहिले सञ्चारका माध्यमबाट थाहा नपाउने हो भने कसरी व्यवहारमा ल्याउन सक्थ्यौं र ?
अब हेरांै, घरबाट काम गर्न तयार त हामी भयौं तर भएका पुर्वाधारले साथ दिएको छैन । नेटमिटिङ्ग गर्न नेटको गति (स्पीड) पुग्दैन । पटक पटक काटिन्छ । साधारणतया नेट उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकहरुले कार्यालय र घरका लागी फरक फरक प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छन् । घरका लागी बाडिँएका नेटको सुविधा एक अङ्गखरा पानी एक हुल प्यास लागेका मानिसको बिचमा राखेर जसले जति सक्यो खानु भनेर दिएको जस्तो छ । जसले जति सक्यो त्यति तानेर लिने । फेरि नेटका सेवा प्रदायक बाटनै सुचना प्राप्त हुन्छ घरमा मिलाएर चलाउनु !
कोरोना, प्रदुषण र आशा
सोमबार, पुस २८, २०७६
फोहोरमैला व्यवथापनको एउटा बिम्ब ‘निलो ड्रम’
लकडाउनको बेलामा बाहिर जान नमिल्ने भएकोले घर टोलमा एकै चोटी सबैले प्रयोग गरेमा नेटको गति न्यून भई नेटमा मिटिङ गर्न अपर्याप्त हुने रहेछ । यस्तो स्थितिमा घरबाट नेटको गति नै पुग्दैन । के गरेर बसुन आजकलका केटाकेटीहरु यस्तो लकडाउनमा नेट बिना ? पहिलाको जस्तो गुच्चा, तेलकासा, लुकामारी खेल्ने संस्कार दिन सकेनौं हामीले । विकल्पको रूपमा यही माध्यमलाई अपनायौं र अब उनीहरुलाई विकासले दिएको विकल्पको प्रयोगमा कमी ल्याउन सक्ने सामर्थ पनि हामीमा छैन ।
ग्याँस अभाव भएका बेला इन्डक्सनमा ढुक्क भएर खाना पकाउने स्थिति पनि छैन । पटक पटक विजुली जाने र ट्रास्फमर पढ्कने समस्या छ सायद घरमा बिजुली चलाउनेको सङ्ख्या बढी भएर होला । छोरा छोरीको अनलाईन पढाईमा नेटले गर्दा आफ्नैखाले पीडा छ । उनीहरुमा नेटको कारणले गयल भइएला भन्ने चिन्ता छ । डराई डराई तरकारी र खाद्यान्न किन्न जानु पर्ने बाध्यता छ । एकातिर कोरोनाले समात्ला भन्ने डर छ भने अर्कातिर सुरक्षार्कमीले रोक्लान भन्ने डर । तरकारी त बोकेर ल्याउँला तर चामलका बोरा बोकेर घरसम्म पु¥याउन समस्या छ किनकी सवारी साधन चल्न दिइएको छैन । यी दैनिक समस्याको घेराम लकडाउन सकिएपछिको हुनसक्ने आर्थिक मन्दी, काम र घरबार त सोच्नै भ्याइएको छैन । बस वर्तमानमा बाँचिएको छ अहिले ।
सञ्चारको कुरा गर्दा गृह मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सञ्चार विज्ञहरुको एक कार्यदल गठन गरौं र विपदको समयमा प्रयोग गर्नु पर्ने रणनीति बनाँऊ, जुन नाफारहित र सेवामुखी होस् । सोही रणनीतिमा आधारित भएर पूर्वाधारहरुको विकास गरौं जसले भविष्यमा हामीलाई विपदका घटनाहरुसँग जुध्न र अनुकुलित रहन मद्दत पु¥याओस् । अरु क्षेत्रमा पनि यसरी नै रणनीति बनाऔं र तयार रहौं । अहिले त केही हप्ता मात्र लकडाउनमा वर्क फ्रम होम होला तर भविष्यमा यो भन्दा ठूलो विपत्ती नआउला भन्न सकिदैन र धेरै समयका लागि घरबाट काम गर्नु पर्ने हुनसक्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थालौं ।
कञ्चन मणि दीक्षित
कोरोना महामारी र मानव अधिकार